DHIIGA OBBOLEEYYAN KEENYAA LAFATTI IRRA FIIGUUN YAKKA! (Dubbisuun dafaa Share, share…..) === Kutaa 2ffaa = (Saphaloo Kadiir irraa) – Beekan Guluma Erena
DHIIGA OBBOLEEYYAN KEENYAA LAFATTI IRRA FIIGUUN YAKKA! (Dubbisuun dafaa Share, share…..) === Kutaa 2ffaa = (Saphaloo Kadiir irraa)	Beekan Erena
Politics Category September 30, 2016Oromo Protest
128SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
DHIIGA OBBOLEEYYAN KEENYAA LAFATTI IRRA FIIGUUN YAKKA!
(Dubbisuun dafaa Share, share…..)
=== Kutaa 2ffaa =
(Saphaloo Kadiir irraa)
Akkuma beekamu waggaa keessatti guyyaan Oromoon hawwiin eeggatuufi guututti Oromummaan itti hirmaatu keessa guddaan ayyaana Irreechaati. Ayyaanni sirna cunqursaatiin awwaalamee baduuf ture kun deebi’ee dagaaguun kan ummata miliyoona 5 ol biyya keessaafi biyya alaa irraa hawwatuufii irratti hirmaatu kun duraaniis Qabsoo Bilisummaa Oromootiin deebi’ee ijaarame waan taheef ammaas qabsoo ilmaan Oromootiin cunqursaa ammaa kana jalaahiis baha. Akkuma kanaan dura ba’aa gabrummaa kana uummata isaanii irraa buusanii Oromiyaa kan oromoo taasisuf gootonni Oromoo kitilli dhiiga dhangalaasaa, lubbuuniis itti dabranii, lafee isaaniitiin qabsoo bilisummaa oromoo finiinsun wareegama qaalii irratti kafalaa sadarkaa arraa kanaan gahan nutiis asii fuunee galmaan geenya.
Aniis kanumarra dhaabbachuun Kutaa tokkoffaa barruu kiyyaa kana mata duree “AADAAFI DUUDHAA KEENYA KABAJACHUUF EENYUULLEE HAYYAMA HIN GAAFANNU!” jedhuun isiniif dhiheessuun kiyya ni yaadatama. Kutaa san keessatti maaliif wayyaaneen fiigicha irreessaa akka qopheessiteefi maaliif namni irreecha dhaquuf hayyama nu gaafachuu qaba jette kan jedhu sababoota isaa tarreesseen ture. Kutaa kana keessatti immoo, Eega wayyaaneen sababoota kana irraa ka’uun tooftaa kana qopheeffatanii nuti hoo maal godhuu qabnaree? Kan jedhuuf deebiin haala armaan gadii kana fayyadamuun kaayyoo wayyaaneefi jala deemtuu isaanii fashaleessuun, teenya immoo fiinxa baafachuun dirqama.
– Irreechi baranaa akka sirnaafi adeemsa wayyaaneen barbaadduutti osoo hin tahin akkaataa aadaafi duudhaa keenya ganamaa hin faalleessine irra dhaabbachuun roga nuti barbaannutti akka kabajamu, haala qabsoo teenya gabbisuufi finiinsuun akka raawwatamu namuu of qopheessuu qaba. Namni hayyama diinaa godhee sagantaa wayyaaneen qopheessitu irratti argame immoo diina Oromooti waan taheef fiigichi hafuu qaba. Hin hafu taanaan immoo rakkoo uumamuuf itti gaafatamni hawaasa Oromoo miti.
– Aadaafi duudhaa ofii kabajachuuf, ayyaanoota ofii itti hirmaachuuf, amantaafi seenaa ofii guddifachuuf eenyullee hayyama hin gaafannu. Kan hayyama kennuu danda’u ummata Oromooti malee diina ilmaan Oromoo ajjeessaa jiru waan hin taneef, OPDOfi warra isin bulchina jedhu kan hayyama hawaasa bulchuufuu hin qabne ayyaana keenyaaf hayyama hin gaafannu. Wayyaaneefi opdo’n mataan isii hayyama nu gaafadhaa jechuu kana dhiiftee ayyaanicha irratti hirmaachuuf isaan mataan isaanii hayyama hawaasa Oromoo irra fudhachuu qabdi. Kanaaf ilmaan oromoo ayyana irreechaa irratti hirmaannu hayyama tokko osoo hin gaafatin gara irreechaa kana dhufuu qaba.
– Baroota dheeraa ilmaan oromoo badii malee dhiigni isaanii rasaasa diinaatiin dhangala’aa kan ture tahuus bara 2014 irraa hanga ammaatti garuu osoo addaan hin citin dhiigni oromoo Oromiyaa guutuu keessa akka galaanaa bishaaniitti ya’u daran hammaatee jira. Kanaaf immoo atileetoonni Oromoos tahee kan biraa marti Oromiyaa keessatti dhiiga obboleeyyan keenyaa irra fiiguun yakka. Yakka qofa osoo hin tahin diinummaafi hadooddii dhabuu waan taheef atileetoonni marti fiigicha guddaa jala bultii ayyaana irreechaatti godhamu kana irratti hirmaachuu hin qaban. Ayyaanichaas tahee jala bultii ayyaana irreechaa fiigichaan osoo hin taane akkuma hawaasa oromootti waan ayyaanicha irratti raawwatamu godhuun kabajachuu qaban.
– Namni kamiyyuu kan Oromo tahee T-shirtiis tahee uffata biraa kan wayyaaneen qophaa’e kana tokkolleen akka hin binne, hin uffanne. Kan bittan yoo jiraattan gubaa, ciraa malee jala bultii ayyaanaafiis tahee ayyaanaaf ykn yeroo biraa uffattanii akka hin argamne. Guyyaa ayyaanaa irreechaa dhalli Oromoo marti uffata aadaa Oromoo qofaan faayamee argamuu qaba. Gama biraatiin barana ayyaanni irreechaa kan yeroo biraa caalaa kan tokkummaafi baayyinni Oromoo itti mirkanaa’u tahuu qaba. Osoo eenyullee hayyama hin gaafatin kan oromoo tahe marti gara irreechaa deemuuf of qopheessuutu irra jiraata. Wayyaaneen baayyina keenya daran tokkummaa keenya sodaattee jirti waan taheef nuti immoo inaada isaaniitiif irreecha irraa tokko hafuu hin qabu.
– Akkaataa Irreechi baranaa itti kabajamu Gumiin Abbootii Gadaa murtii isaanii ifa godhanii jiru. Murtiin abbootii gadaa kuniis: Fiigichi maqaa Irreechaatin godhamu kan isaan beekanfi qopheessan akka hin jirre, Ayyaana irreechaatti hirmaachuuf dursanii galmaa’uus ta’ee hayyamni homaatuu akka hin barbaachifne, Alaabaa Oromoo malee kan OPDOs ta’ee kan Wayyaanee akka jiraachu hin qabne, Ayyaanichi Abbootii Gadaatin waan geggeeffamuuf qondalonni mootummaa akka haasawa hin goone, Baandiin sirbaatis akka hin jirre, kan murtii ummataafi murtii Abbootii Gadaa kan dabree dhiiga warreegamtoota keenyarratti haasaa ololaa oofuufi sirbaan lafa dhiituu barbaadu, tokkummaan ofirraa dhoorguun gahee ummataa akka tahe ibsa jira. Kanaaf akkaatuma gumiin abbootii gadaa murtii kaayan kanaan deemuu qabna.
– Koreewwan ayyaana irreechaaf mootummaan ijaaraman caasaa mootummaa qofaan kan wixineeffame malee hawaasa bal’aa kan hammatee miti. Kanaaf yoo danda’ame ammaan koree san hordoofuun yoo adeemsaa ala bahan ykn faaydaa mootummaa qofa guutuuf yoo sossoo’an kallattii ifa tahee fi nama hojjechiisuu danda’utti qajeelchuu. Yoo hin danda’amne immoo kanuma mootummaan ijaare san fayyadamuudhaan hayyootni Oromoo dhaabbilee barnootaa gara garaa keessa jiran, gumiin abbootii gadaa, namoonni dhuunfaa isaanitiin dhimma kana irratti hojjechudhaaf kaka’umsaa fi fedhiin haala kamiinuu akka ayyaanni kun galma gahu hojjachuu qaban.
– Oromoon dur irraa hanga ammaa lubbuun isaa rasaasa diinaan madaawaa, du’aa, badii malee hidhamaas turee, arraas itti jira. Keessattuu Bara 2014 irraa eegalee hanga arraa hidhaaf ajjeechaan baayyee hammaatee jira. Bara 2016 kana inumaatuu kan hidhamee mana hidhaa jirullee ibiddaan gubee galaafachaa jira. Sababa kanaan lubbuu obboleewwan keenyaa, abbootii fi haawwan keenyaa dhiibbota hedduun lakkaawwaman itti dhabnee jirra. Kun hanga guyyaa roorroo jalaa bilisomnuttiis itti fufuun isaa hin oolu. Hanga duuti jirtu gaddiis jira waan taheef guyyaa irreechaatiis gadda keenya guutuu Oromiyaattiis tahee warri biyyoota alaa jiran, kan carraa ayyana irratti hirmaachuu hin qabnees dabalatee bifaafi haala wal fakkaatuun mallattoo gadda keenya nuuf ibsuu danda’u fayyadamuun ibsachuu qabna.
– Irreecha baranaa qeerroon Oromiyaa guyyaa bilisummaa godhuuf irratti qophaa’aafi socho’aa jiran shakkii jettuun mootummaan nannoo Oromiyaa humna raayyaa ittisa biyyaa, agaazii fi humna addaa federaalaa guyyaa ayyaanaa nageenya eeguuf hirmaatu mootummaa fedeerala gaafatee humni ramadamu leenjii (orentetion) fudhachaa jiraachuu kutaa 1ffaa barruu kootii keessatti ibseen jira. Fedhan miliyoona haa leenjisan nuti immoo dhaabbii tokko qabaachuu qabna. Oromoon Oromiyaa irratti irreeffattu eegumsaafi to’annaa qaama biraa tokko hin barbaaddu. Warri sirna nageeyaa addunyaa kanaafuu kalaqe ofiif nageya isaa eegata malee tigree hin eegduuf. Kanaaf nuti Oromiyaa, lafa Oromoo irratti yoo irreffannu humni Tigree kan nu ajjeessaa, mana hidhaa keessatti oromoo gubaa jiru nu eeguu hin qabu. Hantuutaafi adurreen takkaa nagaya walii eeganii hin beekan waan ta’eef waraanni tokkolleen gaafa irreechaa qarqara san bahuu hin qaban. Kana tuffachuufi diduun humnoonni waraanaa ummata kan goolu yoo ta’e, tarkaanfii ummanni bal’aan mirga isaa kabachiisuuf fudhatuufi gaaga’ama dhalatu maraaf itti gafatamummaa fudhachuuf mootummaan akka of qopheessu ammuma irraa akkeekachiisuun gaariidha.
– Namoonni irreecha irratti roga maraan hirmaatu dhaadannoo irreecha ibsitu, tan warraaqsa cimsitu, tan mirga keenya gaafattufi kkf qopheeffatanii qabatanii gara irreechaa dhaquu qaban. Gama biraatiin abboottiin qabeenyaa dhiiga Oromoo tahaniifi sabboontoonni warreen irreecha dhufu kanaaf tajaajila tolaa laachuuf qaban. Keessattuu warreen konkolaataa qaban guyyaa ayyaana irreechaa kana warra irreecha dhaquuf tajaajila tolaa fedhii irratti hundaa’e osoo laatanii deeggarsa qabsoo qofa osoo hin tahin seenaa oromoo keessattiis galmee kabajaa irratti qalama warqiitiin barraa’u. Kanaaf abboottiin qabeenyaa keenya qabeenyi sabaaf hin taane gatii akka hin qabne hubachuun magaaluma jiran irraa akka tajaajila tolaa laatan lafa jala ibsuun konkolaataa isaanii gaafa irreechaa san tolaan warra ayyaaneeffatu gara bishooftuu geessuuf of qopheessuu qaban.
– Yaada armaan olii dabalatee kanneen biroo kan fiinxa bahiinsa ayyaanichaa saffisan mara Gumiin Abbootii Gadaafi koreen qopheessituu Irreechaa sirritti xiinxaltanii hojitti akka hiikuu qaban. Akka hojitti hiikaniis ni abdanna. Kana tahuu baatee mootummaan fedhiifi faaydaa isaa eegsifachuuf yoo sossoo’u kan itti dhiiftan yoo tahe ummata Oromoo waliin akka walitti buutan hubadhaa.
About Latest Posts Beekan ErenaTeaching, Writing and editing at Books Latest posts by Beekan Erena (see all)	DHUFEERAA BIRASAA: Barreessaafi Waloo: Ilmaan Abbaa tokkoo jedhu! Walaloo ajaa’ibaa kana waliif daddabarsaa. Ebla, 29, 2017 Diinni Gandummaa Maali? - April 29, 2017	DIINQA OROMOO: QOPHII DUBARTOOTA OROMOO: DINKINESH DHERESSA KITILA: BEEKAN GULUMMAA IRRANAA: - April 28, 2017	F/Salamoon Alamuu: Egaa maali YaaWaaqayyoo Furmaanni keenyaa?-Maali Maalli keenyaa? Mucaa Daa’imni kun yeroo itti sagalee miidhagaafi kiilolee kennameefiin faarfattutti - April 27, 2017	Kana Tamsaasi:TweetEmailPrint
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa128SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← GARGAARSI NAMUMMAA GARA LAAFUMMAA IRRAA JALQABAA! (Saphaloo Kadiir’iin)-FAKKEENYUMMAA GAGGAARII KANA WALIIF DADDABARSAA MAALOO!!!
ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT; →
Posts	DHUFEERAA BIRASAA: Barreessaafi Waloo: Ilmaan Abbaa tokkoo jedhu! Walaloo ajaa’ibaa kana waliif daddabarsaa. Ebla, 29, 2017 Diinni Gandummaa Maali?
F/Salamoon Alamuu: Egaa maali YaaWaaqayyoo Furmaanni keenyaa?-Maali Maalli keenyaa? Mucaa Daa’imni kun yeroo itti sagalee miidhagaafi kiilolee kennameefiin faarfattutti
CommentsMurtii Ahmed on KAAYYOO KARAA DHEERAAlencha yigazu on OROMUMMAA FI HABASHAA!-Seenessoo Gabaabaa-Beekan Gulummaa Irranaa’tiMagarsa Nagasaa on IJIBBAATAHAFTEE LAMMII on Kitaabota Afaan OromooQAAMONNI MAQAA SHANEE JEDHU KANAAN HIRRIBA DHABAN KUNNEEN SHAN MARAACHUFI SHAN MARAATANII TURANII? – Faajjii Dhugaasaa, Yuunibarsiitii Haroomayaa irraa! | abdisatato on Asoosama Gabaabaa- Barreessaan: Hamzaa Jemal Mohammed	Recent Posts	DHUFEERAA BIRASAA: Barreessaafi Waloo: Ilmaan Abbaa tokkoo jedhu! Walaloo ajaa’ibaa kana waliif daddabarsaa. Ebla, 29, 2017 Diinni Gandummaa Maali?